Umatshini wokucoca umoya oMncinci waseChina uMenzi kunye neFektri | Saselux
Igama lemveliso：IsiCoci soMoya esiMini
Izinto eziphathekayo：IAluminiyam ingxubevange + ABS
UBungakanani：Ubukhulu: 68 * 187mm
①[Ukucocwa komoya o-2-STAGE] Coca umoya wakho kwi-99.97% yothuli, impova, isilwanyana, umsi kunye nevumba. Inqanaba 1: Ikhabhoni yangaphambi kokucoca ulwelo; Inqanaba 2: Icebo lokucoca ulwelo eliyinyani.
②[UYILO LWEVERSATILE] Ungasifaka esi sicoci somoya emotweni okanye endlwini yakho.
③[I-3 ZABASEBENZI] Fumana useto olululo lwe fan yakho ngeendlela eziphantsi, eziphakathi, kunye neziphezulu
④[IINKCUKACHA ZOKUHAMBA] Ukulinganisa phantsi kwe-1 ikg, oku xa usiya kucoca isicoci somoya esincinci kugcina indawo yakho icocekile ukuya kuthi ga kwiiyure ezili-12 (kuxhomekeke kwisantya sefeni). Xa usiya kwindawo yokugqibela, yixhume ukuze uqhubeke nokuhlaziya umoya.
⑤[OKUFUMANAYO] Isihlambululi somoya esicocekileyo, isihluzi se-2-in-1, intambo yokutshaja i-USB, kunye nesiQinisekiso esifanelekileyo seNyaka emi-5. Iqela lethu lenkxaso yabathengi libonelela ngenkonzo ekumgangatho wemihla ngemihla kunye noxolo lwengqondo kwizigidi kwihlabathi liphela zonke ezivela uphawu onokuthi uthembele.
Egqithileyo isicoci somoya